မြန်မာ့အရေး ဦးဆောင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ Indianapolis မြို့ က ချင်းလူငယ်ခေါင်းဆောင် Justin Thang
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်အာဏာသိမ်းတဲ့ကိစ္စအပေါ် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Indianapolis မြို့မှာနေထိုင်နေတဲ့ ချင်းတိုင်းရင်းသား လူငယ်တွေ သိပ်ကို စိတ်ဝင်တစားရှိကြပြီး၊ ဒီအကြောင်း သူတို့ရဲ့ ကျောင်းတွေမှာသာမက သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်အမတ်တွေအထိ သိရှိစိတ်ဝင်စားအောင် လုပ်နေကြတယ်လို့ ချင်းတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် Justin Thang (ထန်) က ပြောပါတယ်။ Hope For Tomorrow ဆိုတဲ့ ပရဟိတလုပ်ငန်းကို ဦးဆောင်နေတဲ့ Justin Thang (ထန်) ကိုယ်တိုင်လည်း စစ်အာဏာသိမ်းတဲ့ကိစ္စကို လူငယ်တွေနဲ့ အမြဲမပြတ် ဆွေးနွေးပြောပြနေပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ဝေးနေတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေ ဖြစ်ကြပေမယ့် ဘာကြောင့် အခုလို မြန်မာ့အရေးကို တက်တက်ကြွကြွလုပ်နေကြသလဲဆိုတာ Justin Thang (ထန်) ကို မစုမြတ်မွန်က ဆက်သွယ်မေးထားပါတယ်။
မေး ။ ။ မင်္ဂလာပါ Justin Thang ရှင့်။ VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်က ကြိုဆိုပါတယ်ရှင့်။ အခု Justin ကို မေးချင်တာက မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်အာဏာသိမ်းမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အမေရိကန်မှာ ရှိကြတဲ့ မြန်မာပြည်ကလူတွေ တော်တော်များများက သိပ်ပြီးတော့ စိတ်ဝင်တစား ရှိနေကြတယ်။ စစ်အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်း တက်တက်ကြွကြွ လုပ်နေကြတယ်ဆိုတော့ Justin က Indianapolis မှာရှိတဲ့ ချင်းလူမျိုး အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့  လူငယ်ခေါင်းဆောင်တဦး ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ အဲဒီမှာ Justin အပါအဝင် ချင်းလူငယ်တွေကြားမှာ ဒီအပေါ်မှာ ဘယ်လိုမျိုး စိတ်ဝင်တစား ရှိနေကြသလဲဆိုတာကို အရင်ဆုံး သိပါရစေရှင့်။
ဖြေ ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ မင်္ဂလာပါ။ တွေ့ရတာ ဝမ်းသာပါတယ် အမ။ ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ စိတ်ဝင်တစား ရှိတယ်ဆိုတာကို ပြောချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ စိတ်ဝင်စားတာထက် နာကျင်ခံစားရတယ်။ အရမ်းကို ခံစားရတယ်ဆိုတာကို ထည့်ပြောချင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ Indianapolis မြို့ မှာ ဆန္ဒ ပထမဆုံးပြတော့မယ်လို့ စည်းရုံးတဲ့အချိန်မှာ နံပတ်တစ်က လူငယ်ခေါင်းဆောင်တွေ ဖြစ်တယ်။ အကုန်လုံးက အသက် နှစ်ဆယ်၊ နှစ်ဆယ့်ငါး၊ သုံးဆယ်အောက်တွေပေါ့ ကျနော်တို့အပါအဝင်။ ဆိုတဲ့အခါကြတော့ လူငယ်တွေ အရမ်းစိတ်ဝင်စားတယ်။ ခေါင်းဆောင်မှုပိုင်းကို တာဝန်ယူတဲ့ဟာကို တွေ့ရတယ်။ အဲဒီတော့ လူငယ်တွေရဲ့  အခန်းကဏ္ဍကို အရမ်းကျေနပ်မိတယ်။ အဓိက ဒီမြို့ မှာဆိုရင် ဆန္ဒပြတာတွေ အကြိမ်ပေါင်းမနည်းတော့ဘူး။ များသောအားဖြင့် လူငယ်တွေ ဦးဆောင်တယ်။ ပြီးတော့ ကျနော်တို့ ရုံးတွေမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ရုံးတွေ၊ ကျောင်းတက်တဲ့ကျောင်းတွေမှာ ထိုင်သပိတ်တွေ စလုပ်တယ်။ ပြီးတော့ ကျနော်တို့ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးတွေ Principals, Professors တွေကို စာတွေရေးကြတယ်။ ပြီးတော့ Senators, Congressmen တွေကို စာတွေရေးတယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်ရာ သက်ဆိုင်ကြောင်း ဗမာပြည်မှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အကြောင်းတွေကို မျှဝေပြီးတော့ တက်တက်ကြွကြွနဲ့ လှုပ်ရှားကြတာကို တွေ့ရတယ်။ ကျနော်လည်း အဲဒီအထဲက တယောက်အပါအဝင်ပေါ့။
မေး ။ ။ Justin ပြောခဲ့သလို မြန်မာ့အရေးကို အမေရိကန်နိုင်ငံ Indianapolis မှာ ရှိနေတဲ့ လူတွေပိုပြီးတော့ သိလာအောင်၊ နားလည်လာအောင်လို့ ကျောင်းတွေမှာ လုပ်ကြတယ်ဆိုတော့ အဲဒါ ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေ ဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အဲဒီလိုမျိုး လုပ်နေတဲ့ ဆယ်ကျော်သက် ကျောင်းတက်နေတဲ့ လူငယ်တွေက ဘယ်လောက်များလဲ။ ဒီလိုလှုပ်ရှားမှု လုပ်နေတဲ့ လူတွေက ဘယ်လောက်များပါသလဲရှင့်။
ဖြေ ။ ။ အမပြောသလို ဦးဆောင်တဲ့လူတွေက ဆယ်ကျော်သက်တွေ ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်အတွက်တော့ လူဦးရေ ဘယ်နှစ်ယောက်ဆိုတာတော့ အတိအကျတော့ ပြောဖို့ခက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ များတယ် ကျနော်တို့ Indianapolis မှာဆိုရင် Perry township ဆိုတာရှိတယ်။ အဲဒီမြို့ နယ်မှာ အထက်တန်းကျောင်း နှစ်ကျောင်း ရှိတယ်။ ပြီးတော့ မူလတန်း၊ အလယ်တန်းကျောင်းတွေ အများကြီးရှိတယ်။ အဲဒီမှာ ချင်းတွေက အယောက် (၆) ထောင် (၇) ထောင်လောက် ကျောင်းတက်တယ်။ အဲဒီလူငယ်တွေက အရမ်းကို တက်တက်ကြွကြွနဲ့ ပါဝင်လာကြတယ်။
မေး ။ ။ Justin စောစောကပြောသလို အမေရိကန်နိုင်ငံမှာနေနေတဲ့ ချင်းလူငယ်အများစုက အမေရိကမှာ ဟိုးငယ်ငယ်ကတည်းက သူတို့မိဘတွေနဲ့ ရောက်လာကြတယ်။ အများစုကတော့ တတိယနိုင်ငံမှာ အခြေချတဲ့ ဒုက္ခသည်အဖြစ် ရောက်လာကြသူတွေ။ တချို့ ကလဲ ဒီမှာမွေးကြတာပေါ့။ ဆိုတော့ အဲဒီလိုမျိုး မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ အဆက်အစပ် အလှမ်းဝေးတဲ့ လူငယ်တွေက အခုလောက်အထိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်အာဏာသိမ်းတဲ့ကိစ္စအပေါ်မှာ စိတ်ဝင်တစား ရှိနေကြတာ ဘာကြောင့်လဲ ထင်ပါသလဲ။
ဖြေ ။ ။ I really love the question. အရမ်းကြိုက်တယ် အဲဒီမေးခွန်းကို။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အရေးကြီးတယ်လို့လည်း ကျနော်ထင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ များသောအားဖြင့် ကျနော်ကိုယ်တိုင် တကယ်ဆိုလို့ရှိရင် Status အရ အမေရိကန်နိုင်ငံသား ဖြစ်နေပြီ။ ဒါပေမဲ့ ကျနော် အရမ်း encouragement ဖြစ်တာတခုက ဘာလဲဆိုတော့ ဒီကိစ္စဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာ ကျနော်တို့ ဒီနိုင်ငံမှာ ကြီးပြင်းလာတဲ့ ကလေးတွေ၊ လူငယ်တွေရဲ့  လှုပ်ရှားမှုက အရမ်းကို ခွန်အားရစရာကောင်းတယ်။ ကျနော်ဆိုလို့ရှိရင် အခုနပြောသလို (၁၆) နှစ်အထိပဲ ဗမာပြည်မှာ နေခဲ့တယ်။ ကျနော် အခု Indianapolis မှာ အရမ်းကို လှုပ်ရှားနေတဲ့ လူငယ်တွေကတော့ (၂) နှစ် (၃) နှစ် (၄) နှစ်ကတည်းက စရောက်ကြတဲ့ လူတွေဖြစ်တယ်။ တချို့ ဆိုရင် ဒီမှာမွေးတဲ့လူတွေ ရှိတယ်။ (၁၅) နှစ် (၁၆) နှစ် အထက်တန်းကျောင်းသားတွေဆိုရင်။ သူတို့တွေဆို အရမ်းကိုတက်ကြွနေကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘာလို့ အဲဒီလောက်အထိ သူတို့နဲ့ အဆက်အသွယ်မရှိတော့တဲ့ နိုင်ငံကို ဒီလောက်အထိ ချစ်ခင်တွယ်တာနေသလဲဆိုရင် ကျနော် ပထမဦးဆုံး တွေ့တဲ့ဟာကတော့ They still love Burma. ဗမာနိုင်ငံ မြန်မာနိုင်ငံကို သူတို့ချစ်နေဆဲကို ကျနော် တွေ့ရတယ်။ ပြီးလို့ရှိရင် ဒုတိယကတော့ They know where they come from. They know who they are. ကျနော်အပါအဝင် ကျနော်အမေရိကန်နိုင်ငံသား ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ ကျနော်ဘယ်သူလဲ။ ကျနော် ဘယ်နိုင်ငံကလာလဲ။ ကျနော် ဘယ်ကလာသလဲဆိုတာကို ကောင်းကောင်းသိတယ်။ ဒီနိုင်ငံမှာပဲ ကြီးပြင်းပါစေ၊ ဘယ်လိုအလုပ်အကိုင်ပဲ လုပ်ပါစေ။ ဆိုတဲ့အခါကြတော့ အဲဒီစိတ်ထား ကျနော်တို့ လူငယ်တွေ ချင်းလူငယ်တွေထဲမှာ ရှိနေတယ်ဆိုတာကို ကျနော် တွေ့ရတယ်။
တတိယအချက်ကတော့ ကျနော်တို့ ဒီနိုင်ငံကို အမပြောသလို ရောက်လာတဲ့ အကြောင်းရင်းက လူမဆန်တဲ့ Dictatorship Government အာဏာရှင်အစိုးရတွေကြောင့် ဖြစ်တယ်။ လူမဆန်တဲ့ စစ်အုပ်ချုပ်မှုကြောင့် ကျနော်တို့ ဒီနိုင်ငံကို ရောက်ရှိလာတာ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီအခါကြတော့ ကျနော်တို့ (၂) နှစ်သားပဲ ဖြစ်ပါစေ၊ (၃) နှစ်သားကတည်းက ဒီနိုင်ငံကို ရောက်ပါစေ၊ ဒီနိုင်ငံမှာပဲ မွေးနေပါစေ။ ကျနော်တို့ရဲ့  မိဘတွေက အဲဒီနိုင်ငံ၊ အဲဒီအုပ်ချုပ်မှု ဆိုးဝါးတဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်အောက်ကနေ ထွက်လာကြပြီး ရုန်းကန်ပြီး အခက်အခဲပေါင်းများစွာ - အမ သိတာပဲ ဒီနိုင်ငံမှာဆိုတာ ဘုရင်လို လာနေတာ မဟုတ်ဘူးလေ - အခက်အခဲပေါင်းများစွာနဲ့ မိဘတွေလည်း ရုန်းကန်ပြီးတော့ လာနေကြတယ်။ အဲဒါကို ကြည့်ရင်နဲ့ ဒီလိုမျိုးဘဝ ကျနော်တို့ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ မဟုတ်ဘဲနဲ့ သူများနိုင်ငံမှာ မိဘတွေ ဒီလိုခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ လာနေကြတယ်ဆိုတာကို သူတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာ ဒီစစ်အုပ်ဆိုးမှု Dictatorship Military Coup ဆိုတာ လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူး။ အဲဒီအတွက်ကြောင့်မို့ သူတို့ပိုပြီးတော့ ဒီကိစ္စမှာ ထဲထဲဝင်ဝင် ပါဝင်လာကြတာ ဖြစ်တယ်လို့ ကျနော်မြင်တယ်။ နောက်ဆုံး ဘာဖြစ်လို့ ချင်းလူငယ်တွေ အသားကုန် ဒီနိုင်ငံမှာ သူတို့ရတဲ့ အခွင့်အရေး၊ အခွင့်အလမ်းပေါ်မှာ Platform ရှိသမျှကို အသုံးပြုပြီးတော့ လှုပ်ရှားနေသလဲဆိုရင် နောက်ဆုံး ကျနော်မြင်တာကတော့ ချင်းမိုလို့၊ ခရစ်ယာန်မိုလို့၊ မြန်မာနိုင်ငံကလာတဲ့ လူမိုလို့ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့နိုင်ငံ ကြီးပြင်းလာတဲ့ နိုင်ငံက Freedom ကို ဦးစားပေးသူတွေဖြစ်ပြီး၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ လူ့အရေး လူသားချင်းစာနာမှု အပြည့်အဝရှိတဲ့ နိုင်ငံမှာ ကြီးပြင်းလာတဲ့ လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် သူတို့လာတဲ့နိုင်ငံ၊ သူတို့ မွေးဖွားတဲ့နိုင်ငံမှာ ဒီလိုမျိုး လူမဆန်တဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေ ဖြစ်နေတာကို လူသားတယောက်အနေနဲ့ လက်မခံလို့။ ကျနော်ကိုယ်တိုင် လက်မခံနိုင်လို့ ရှိတဲ့ Platform တွေကို သုံးပြီးတော့ တတ်နိုင်သလောက် ပါဝင်ကြတာထင်တယ်။ အဲဒါကြောင့် ကျနော်တို့ ငယ်ငယ်ကတည်းက ရောက်လာကြတဲ့ လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒီမှာ (၁၅-၁၆) နှစ်မှာ ရောက်လာကြသူတွေပဲဖြစ်ဖြစ် ပထမဆုံးကတော့ ကိုယ့်နိုင်ငံကို ချစ်တဲ့စိတ် ရှိပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်၊ ပြီးတော့ လူမဆန်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို လက်မခံတဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီလိုမျိုး ထဲထဲဝင်ဝင် ပါဝင်ကြတယ်လို့ ကျနော် ထင်ပါတယ်။
မေး ။ ။ Justin အနေနဲ့ လူငယ်တွေကို ပိုပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံအရေး ပိုပြီးတော့ နားလည်အောင်၊ သဘောပေါက်အောင် ဘယ်လိုမျိုးတွေ ကြိုးစားပြီးတော့ လုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတာကိုလည်း သိပါရစေရှင့်။
ဖြေ ။ ။ ကျနော်ကလည်း ဘုရားကျောင်းက လူငယ်ခေါင်းဆောင်တယောက်ပေါ့။ ဒီလိုမျိုး ပြဿနာ စဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ ကျနော်တို့ ဘုရားကျောင်းမှာရှိတဲ့ လူငယ်တွေကို ဆက်သွယ်တယ်။ ကျနော်တို့နိုင်ငံအတွက် ဆုတောင်းရအောင်၊ ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာတွေ စဉ်းစားရအောင်ဆိုပြီး ကျနော်တို့ Zoom Meeting ခေါ်တယ်။ အစည်းအဝေးခေါ်တဲ့အချိန်မှာ တချို့ ဆိုရင် (၁၃) နှစ် (၁၄) နှစ်သားအရွယ်ပဲ ရှိသေးတယ် - တချို့ လူငယ်တွေက။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျနော်က နည်းနည်းသတိထားတာက အသက် (၁၃-၁၄) လူငယ်ကလေးလေးတွေက ဒီဗမာပြည်အကြောင်းကို How can I explain to them? နားလည်အောင် ဘယ်လိုပြောပြရမလဲ။ အဲဒီလို ကျနော် နည်းနည်းတွန့်ဆုတ်မိတယ်။ ကျနော်က သူတို့ကို စပြောခိုင်းတယ်။ Whatever you feel inside tell me အခု မြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျနော်ကို ပြောပါဆိုပြီး စပြောလိုက်တယ်။ (၁၃-၁၄-၁၅) နှစ် ကလေးတွေ - ဒီနိုင်ငံကို (၁) နှစ်ကတည်းက ရောက်ခဲ့တဲ့ ကလေးတွေက စငိုတယ်။ ဒီလိုမျိုး ဒီကိစ္စကို ကြားတဲ့အချိန်မှာ။ ဆိုတော့ ဘန်းစကားနဲ့ ပြောမယ်ဆိုရင် ကျနော် Heart ထိသွားတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျနော်က သူတို့တွေ ဒီကိစ္စတွေ မသိဘူး။ ဒီမှာပဲ ကြီးပြင်းလာကြတာဆိုတော့ ဒီအကြောင်းကို ဟိုးအစကနေ ၁၉၆၀ လောက်ကနေ ပြန်ရှင်းရမယ်လို့ လိုမယ်ထင်တာ။ ဒါပေမဲ့ ဒီ (၁၃-၁၄) နှစ် ကလေးတွေက Instragram, Facebook စသုံးလာပြီးဆိုတော့ ဒီဗမာပြည်ကိစ္စ ဟိုးစစ်ကောင်စီ - လွတ်လပ်ရေးရပြီးကနေ အခုဖြစ်ပျက်နေတာတွေကို သူတို့တွေ ဖုန်းထဲမှာ စမြင် စကြည့်လို့ရပြီ။ သတင်းစာလို စာဖတ်နေပြီ။ အဲဒီအခါကြတော့ ဒီကိစ္စကို ခံစားပြီးတော့ စငိုကြတယ်။ ဆုမတောင်းခင်မှာ။ ပြောချင်တာက လူငယ်တွေကို အထူးသဖြင့် ဒီနိုင်ငံမှာ ကြီးပြင်းလာတဲ့ လူငယ်တွေကို အထူးတလည် ဒီကိစ္စတွေကို ရှင်းပြစရာတောင် မလိုတော့ဘူး။
သူတို့တွေ ဒီလိုမျိုး အဖြစ်အပျက်ဆိုးကြီးကို သူတို့ဘာသာ သိလာတယ်။ VOA ရယ် ပရိသတ်တွေကိုလည်း ပြောပြချင်တယ်။ နိုင်ငံခြားရောက် လူငယ်တွေလည်း ခေတ်မနောက်ကျတော့ဘူး။ ဗမာ့အကြောင်း၊ မြန်မာ့အကြောင်းကို အများကြီးသိရှိနားလည်လာပြီဆိုတာကို ပြောချင်တယ်။ လူငယ်ပိုင်းကိုတော့ အဓိကအားဖြင့်တော့ တတ်နိုင်သလောက် ခွန်းအားပေးကြတယ်။ Each other encouragement လုပ်ကြတယ်။ သူတို့နဲ့ သက်ဆိုင်ရာ သက်ဆိုင်ကျောင်းမှာ ဒီကိစ္စကို ပုံမှန် Normal ပြန်မဖြစ်သွားအောင် လူတွေရဲ့  စိတ်ဝင်စားမှု ပိုကြီးမားလာအောင် နည်းလမ်းမျိုးစုံ သုံးပြီးတော့ ခွန်းအားပေးနေကြတယ်။ ကျနော်ဆိုရင် အစိုးရတွေနဲ့ အဆက်အသွယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ မြို့ နယ်အုပ်ချုပ်ရေးတွေ၊ ကွန်ဂရက်ရုံးတွေ၊ ဆီနိတ်ရုံးတွေကိုလည်း အဆက်မပြတ် တပတ်တခါလောက် ကျနော်တို့ သူတို့ကို ဗမာပြည်မှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို အသိပေးတယ်။ ဆက်သွယ်လုပ်ပေးတယ်။
မေး ။ ။ နောက်ဆုံးတခု မေးချင်တာက Justin တို့အနေနဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထဲမှာရှိတဲ့ ချင်းတိုင်းရင်းသားတွေအပြင် တခြားတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေ ကရင်၊ ကချင်၊ တခြားတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး၊ စုပေါင်းပြီးတော့ ဒီအာဏာသိမ်းမှုကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ လှုပ်ရှားနေတာမျိုး ရှိပါသလားရှင့်။
ဖြေ ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ ရှိပါတယ်။ ကျနော် တခု ဥပမာပြောမယ်ဆိုရင် ဝါရှင်တန်ဒီစီ - အမတို့နေတဲ့ ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာဆိုရင် အပတ်တိုင်းလိုလို Every Weekend မှာ ဆန္ဒပြမှု၊ ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေ လုပ်နေကြတယ်။ အဲဒီဟာတွေကတော့ Multiethnic groups မြန်မာပြည်ကလာကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ လှုပ်ရှားနေကြတာကို တွေ့ရတယ်။ အဲဒီအထဲမှာလဲ ပါဝင်ကြတဲ့ ချင်းလူငယ်တွေ အများစု။ ချင်းလူငယ်အဖွဲ့အစည်း အများစုလည်း အဲဒီအထဲမှာ ပါဝင်ကြတယ်ဆိုတော့ ကိုယ်နေတဲ့နေရာ၊ ကိုယ်တွေရဲ့  မြို့ ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ လှုပ်ရှားတာတွေ ရှိတယ်။ နောက် Indianapolis မှာ အခုနပြောသလို (၉၀) ရာခိုင်နှုန်းသော ခေါင်းဆောင်တွေက ချင်းတွေဖြစ်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ချင်းလူမျိုး နှစ်သောင်းငါးထောင်လောက် ဒီမှာရှိတယ်ဆိုတော့ ချင်းလူငယ်တွေကြီးပဲ မဟုတ်ဘူး။ ဗမာတွေ ရှိတယ်။ ကရင်၊ ရခိုင်တွေ ရှိတယ်။ မွန်၊ ရှမ်းတွေလည်း ရှိတယ်။ ဆိုတော့ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ လူကြီးတွေ ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ လှုပ်ရှားတာတွေ ရှိတယ်။ ဆိုတော့ ဒီစစ်အာဏာသိမ်းမှုကတော့ လူမျိုးတမျိုးအရေး မဟုတ်ဘူး။ ဘာသာတဘာသာအရေး မဟုတ်တော့ဘူး။ ဒီဟာက မြန်မာနိုင်ငံဖွား လူတိုင်း တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံရဲ့  အရေးကိစ္စ ဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံက လူတွေရဲ့  အရေးပဲ မဟုတ်ဘူး၊ ကမ္ဘာ့အရေး ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်း ကျနော်တို့ အသိုင်းအဝိုင်း၊ ကျနော်တို့ Community၊ ကျနော်တို့ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းကိုလည်း သိစေချင်တယ်။ ဗမာပြည်မှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကိစ္စက ဗမာပြည်ရဲ့  ကိစ္စ မဟုတ်ဘူး။ This is not Burma issue. This is the world issue ဆိုတာကို လူတွေကို သိခိုင်းဖို့ သိစေဖို့က အရမ်းအရေးကြီးတယ်။ အဲဒီအခါကြတော့ ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့  လှုပ်ရှားမှု။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မွေးဖွားတဲ့လူတွေ၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကြီးပြင်းတဲလူတွေရဲ့  လှုပ်ရှားမှု အရမ်းအရေးကြီးတယ်။ ဒါပေမဲ့ International issue ဖြစ်တဲ့အထိ လုပ်ဆောင်ဖို့လည်း ကျနော်တို့ဆီမှာ တာဝန်ရှိတယ်လို့ ထင်တယ်။ အဲဒီအတွက်ကြောင့် တိုင်းရင်းသားတွေပဲ မဟုတ်ဘဲနဲ့ နိုင်ငံတကာ ကိုယ်နဲ့ဆက်သွယ်ရာ ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ရာ Connection တွေမှာ ဒီအကြောင်းကို အမြဲတမ်း သူတို့ကို နားလည်အောင်၊ ကူညီနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ဖို့၊ အကူအညီတောင်းဖို့လည်း တာဝန်ရှိတယ်လို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။
မစုမြတ်မွန် ။ ။ Justin Thang ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်ရှင့်။ အခုလိုမျိုး အချိန်ပေးပြီး ဖြေကြားပေးတဲ့အတွက်။
ဖြေ ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်။
မွနျမာ့အရေး လှုပျရှားနတေဲ့ Indianapolis မွို့ကခငျြးလူငယျမြား
မွနျမာနိုငျငံမှာ စဈအာဏာသိမျးတဲ့ကိစ်စအပျေါ အမရေိကနျပွညျထောငျစု Indianapolis မွို့မှာနထေိုငျနတေဲ့ ခငျြးတိုငျးရငျးသား လူငယျတှေ သိပျကို စိတျဝငျတစားရှိကွပွီး၊ ဒီအကွောငျး သူတို့ရဲ့ ကြောငျးတှမှောသာမက သကျဆိုငျရာ လှတျတျောအမတျတှအေထိ သိရှိစိတျဝငျစားအောငျ လုပျနကွေတယျလို့ ခငျြးတိုငျးရငျးသားခေါငျးဆောငျ Justin Thang (ထနျ) က ပွောပါတယျ။ Hope For Tomorrow ဆိုတဲ့ ပရဟိတလုပျငနျးကို ဦးဆောငျနတေဲ့ Justin Thang (ထနျ) ကိုယျတိုငျလညျး စဈအာဏာသိမျးတဲ့ကိစ်စကို လူငယျတှနေဲ့ အမွဲမပွတျ ဆှေးနှေးပွောပွနပေါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံနဲ့ ဝေးနတေဲ့ ဆယျကြျောသကျလူငယျတှေ ဖွဈကွပမေယျ့ ဘာကွောငျ့ အခုလို မွနျမာ့အရေးကို တကျတကျကွှကွှလုပျနကွေသလဲဆိုတာ Justin Thang (ထနျ) ကို မစုမွတျမှနျက ဆကျသှယျမေးထားပါတယျ။
မေး ။ ။ မင်ျဂလာပါ Justin Thang ရှငျ့။ VOA မွနျမာပိုငျးအစီအစဉျက ကွိုဆိုပါတယျရှငျ့။ အခု Justin ကို မေးခငျြတာက မွနျမာနိုငျငံမှာ စဈအာဏာသိမျးမှုနဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ အမရေိကနျမှာ ရှိကွတဲ့ မွနျမာပွညျကလူတှေ တျောတျောမြားမြားက သိပျပွီးတော့ စိတျဝငျတစား ရှိနကွေတယျ။ စဈအာဏာရှငျ ဆနျ့ကငျြလှုပျရှားမှုတှကေိုလညျး တကျတကျကွှကွှ လုပျနကွေတယျဆိုတော့ Justin က Indianapolis မှာရှိတဲ့ ခငျြးလူမြိုး အသိုငျးအဝိုငျးရဲ့ လူငယျခေါငျးဆောငျတဦး ဖွဈပါတယျဆိုတော့ အဲဒီမှာ Justin အပါအဝငျ ခငျြးလူငယျတှကွေားမှာ ဒီအပျေါမှာ ဘယျလိုမြိုး စိတျဝငျတစား ရှိနကွေသလဲဆိုတာကို အရငျဆုံး သိပါရစရှေငျ့။
ဖွေ ။ ။ ဟုတျကဲ့ မင်ျဂလာပါ။ တှရေ့တာ ဝမျးသာပါတယျ အမ။ ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့ စိတျဝငျတစား ရှိတယျဆိုတာကို ပွောခငျြတယျ။ ဒါပမေဲ့ စိတျဝငျစားတာထကျ နာကငျြခံစားရတယျ။ အရမျးကို ခံစားရတယျဆိုတာကို ထညျ့ပွောခငျြပါတယျ။ ကနြျောတို့ Indianapolis မွို့မှာ ဆန်ဒ ပထမဆုံးပွတော့မယျလို့ စညျးရုံးတဲ့အခြိနျမှာ နံပတျတဈက လူငယျခေါငျးဆောငျတှေ ဖွဈတယျ။ အကုနျလုံးက အသကျ နှဈဆယျ၊ နှဈဆယျ့ငါး၊ သုံးဆယျအောကျတှပေေါ့ ကနြျောတို့အပါအဝငျ။ ဆိုတဲ့အခါကွတော့ လူငယျတှေ အရမျးစိတျဝငျစားတယျ။ ခေါငျးဆောငျမှုပိုငျးကို တာဝနျယူတဲ့ဟာကို တှရေ့တယျ။ အဲဒီတော့ လူငယျတှရေဲ့ အခနျးကဏ်ဍကို အရမျးကနြေပျမိတယျ။ အဓိက ဒီမွို့မှာဆိုရငျ ဆန်ဒပွတာတှေ အကွိမျပေါငျးမနညျးတော့ဘူး။ မြားသောအားဖွငျ့ လူငယျတှေ ဦးဆောငျတယျ။ ပွီးတော့ ကနြျောတို့ ရုံးတှမှော အလုပျလုပျတဲ့ရုံးတှေ၊ ကြောငျးတကျတဲ့ကြောငျးတှမှော ထိုငျသပိတျတှေ စလုပျတယျ။ ပွီးတော့ ကနြျောတို့ ကြောငျးအုပျဆရာကွီးတှေ Principals, Professors တှကေို စာတှရေေးကွတယျ။ ပွီးတော့ Senators, Congressmen တှကေို စာတှရေေးတယျ။ ပွီးတော့ ကိုယျနဲ့သကျဆိုငျရာ သကျဆိုငျကွောငျး ဗမာပွညျမှာ ဖွဈပကျြနတေဲ့ အကွောငျးတှကေို မြှဝပွေီးတော့ တကျတကျကွှကွှနဲ့ လှုပျရှားကွတာကို တှရေ့တယျ။ ကနြျောလညျး အဲဒီအထဲက တယောကျအပါအဝငျပေါ့။
မေး ။ ။ Justin ပွောခဲ့သလို မွနျမာ့အရေးကို အမရေိကနျနိုငျငံ Indianapolis မှာ ရှိနတေဲ့ လူတှပေိုပွီးတော့ သိလာအောငျ၊ နားလညျလာအောငျလို့ ကြောငျးတှမှော လုပျကွတယျဆိုတော့ အဲဒါ ဆယျကြျောသကျလူငယျတှေ ဖွဈမယျလို့ ထငျပါတယျ။ အဲဒီလိုမြိုး လုပျနတေဲ့ ဆယျကြျောသကျ ကြောငျးတကျနတေဲ့ လူငယျတှကေ ဘယျလောကျမြားလဲ။ ဒီလိုလှုပျရှားမှု လုပျနတေဲ့ လူတှကေ ဘယျလောကျမြားပါသလဲရှငျ့။
ဖွေ ။ ။ အမပွောသလို ဦးဆောငျတဲ့လူတှကေ ဆယျကြျောသကျတှေ ဖွဈတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကနြျောအတှကျတော့ လူဦးရေ ဘယျနှဈယောကျဆိုတာတော့ အတိအကတြော့ ပွောဖို့ခကျတယျ။ ဒါပမေဲ့ မြားတယျ ကနြျောတို့ Indianapolis မှာဆိုရငျ Perry township ဆိုတာရှိတယျ။ အဲဒီမွို့နယျမှာ အထကျတနျးကြောငျး နှဈကြောငျး ရှိတယျ။ ပွီးတော့ မူလတနျး၊ အလယျတနျးကြောငျးတှေ အမြားကွီးရှိတယျ။ အဲဒီမှာ ခငျြးတှကေ အယောကျ (၆) ထောငျ (၇) ထောငျလောကျ ကြောငျးတကျတယျ။ အဲဒီလူငယျတှကေ အရမျးကို တကျတကျကွှကွှနဲ့ ပါဝငျလာကွတယျ။
မေး ။ ။ Justin စောစောကပွောသလို အမရေိကနျနိုငျငံမှာနနေတေဲ့ ခငျြးလူငယျအမြားစုက အမရေိကမှာ ဟိုးငယျငယျကတညျးက သူတို့မိဘတှနေဲ့ ရောကျလာကွတယျ။ အမြားစုကတော့ တတိယနိုငျငံမှာ အခွခေတြဲ့ ဒုက်ခသညျအဖွဈ ရောကျလာကွသူတှေ။ တခြို့ကလဲ ဒီမှာမှေးကွတာပေါ့။ ဆိုတော့ အဲဒီလိုမြိုး မွနျမာနိုငျငံနဲ့ အဆကျအစပျ အလှမျးဝေးတဲ့ လူငယျတှကေ အခုလောကျအထိ မွနျမာနိုငျငံမှာ စဈအာဏာသိမျးတဲ့ကိစ်စအပျေါမှာ စိတျဝငျတစား ရှိနကွေတာ ဘာကွောငျ့လဲ ထငျပါသလဲ။
ဖွေ ။ ။ I really love the question. အရမျးကွိုကျတယျ အဲဒီမေးခှနျးကို။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ အရေးကွီးတယျလို့လညျး ကနြျောထငျတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ မြားသောအားဖွငျ့ ကနြျောကိုယျတိုငျ တကယျဆိုလို့ရှိရငျ Status အရ အမရေိကနျနိုငျငံသား ဖွဈနပွေီ။ ဒါပမေဲ့ ကနြျော အရမျး encouragement ဖွဈတာတခုက ဘာလဲဆိုတော့ ဒီကိစ်စဖွဈပျေါလာတဲ့အခြိနျမှာ ကနြျောတို့ ဒီနိုငျငံမှာ ကွီးပွငျးလာတဲ့ ကလေးတှေ၊ လူငယျတှရေဲ့ လှုပျရှားမှုက အရမျးကို ခှနျအားရစရာကောငျးတယျ။ ကနြျောဆိုလို့ရှိရငျ အခုနပွောသလို (၁၆) နှဈအထိပဲ ဗမာပွညျမှာ နခေဲ့တယျ။ ကနြျော အခု Indianapolis မှာ အရမျးကို လှုပျရှားနတေဲ့ လူငယျတှကေတော့ (၂) နှဈ (၃) နှဈ (၄) နှဈကတညျးက စရောကျကွတဲ့ လူတှဖွေဈတယျ။ တခြို့ဆိုရငျ ဒီမှာမှေးတဲ့လူတှေ ရှိတယျ။ (၁၅) နှဈ (၁၆) နှဈ အထကျတနျးကြောငျးသားတှဆေိုရငျ။ သူတို့တှဆေို အရမျးကိုတကျကွှနကွေတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဘာလို့ အဲဒီလောကျအထိ သူတို့နဲ့ အဆကျအသှယျမရှိတော့တဲ့ နိုငျငံကို ဒီလောကျအထိ ခဈြခငျတှယျတာနသေလဲဆိုရငျ ကနြျော ပထမဦးဆုံး တှတေဲ့ဟာကတော့ They still love Burma. ဗမာနိုငျငံ မွနျမာနိုငျငံကို သူတို့ခဈြနဆေဲကို ကနြျော တှရေ့တယျ။ ပွီးလို့ရှိရငျ ဒုတိယကတော့ They know where they come from. They know who they are. ကနြျောအပါအဝငျ ကနြျောအမရေိကနျနိုငျငံသား ဖွဈတယျ။ ဒါပမေဲ့ လူငယျတယောကျအနနေဲ့ ကနြျောဘယျသူလဲ။ ကနြျော ဘယျနိုငျငံကလာလဲ။ ကနြျော ဘယျကလာသလဲဆိုတာကို ကောငျးကောငျးသိတယျ။ ဒီနိုငျငံမှာပဲ ကွီးပွငျးပါစေ၊ ဘယျလိုအလုပျအကိုငျပဲ လုပျပါစေ။ ဆိုတဲ့အခါကွတော့ အဲဒီစိတျထား ကနြျောတို့ လူငယျတှေ ခငျြးလူငယျတှထေဲမှာ ရှိနတေယျဆိုတာကို ကနြျော တှရေ့တယျ။
တတိယအခကျြကတော့ ကနြျောတို့ ဒီနိုငျငံကို အမပွောသလို ရောကျလာတဲ့ အကွောငျးရငျးက လူမဆနျတဲ့ Dictatorship Government အာဏာရှငျအစိုးရတှကွေောငျ့ ဖွဈတယျ။ လူမဆနျတဲ့ စဈအုပျခြုပျမှုကွောငျ့ ကနြျောတို့ ဒီနိုငျငံကို ရောကျရှိလာတာ ဖွဈတယျ။ အဲဒီအခါကွတော့ ကနြျောတို့ (၂) နှဈသားပဲ ဖွဈပါစေ၊ (၃) နှဈသားကတညျးက ဒီနိုငျငံကို ရောကျပါစေ၊ ဒီနိုငျငံမှာပဲ မှေးနပေါစေ။ ကနြျောတို့ရဲ့ မိဘတှကေ အဲဒီနိုငျငံ၊ အဲဒီအုပျခြုပျမှု ဆိုးဝါးတဲ့အုပျခြုပျမှုစနဈအောကျကနေ ထှကျလာကွပွီး ရုနျးကနျပွီး အခကျအခဲပေါငျးမြားစှာ - အမ သိတာပဲ ဒီနိုငျငံမှာဆိုတာ ဘုရငျလို လာနတော မဟုတျဘူးလေ - အခကျအခဲပေါငျးမြားစှာနဲ့ မိဘတှလေညျး ရုနျးကနျပွီးတော့ လာနကွေတယျ။ အဲဒါကို ကွညျ့ရငျနဲ့ ဒီလိုမြိုးဘဝ ကနြျောတို့ ကိုယျ့နိုငျငံမှာ မဟုတျဘဲနဲ့ သူမြားနိုငျငံမှာ မိဘတှေ ဒီလိုခကျခကျခဲခဲနဲ့ လာနကွေတယျဆိုတာကို သူတို့ကွညျ့တဲ့အခါမှာ ဒီစဈအုပျဆိုးမှု Dictatorship Military Coup ဆိုတာ လုံးဝလကျမခံနိုငျဘူး။ အဲဒီအတှကျကွောငျ့မို့ သူတို့ပိုပွီးတော့ ဒီကိစ်စမှာ ထဲထဲဝငျဝငျ ပါဝငျလာကွတာ ဖွဈတယျလို့ ကနြျောမွငျတယျ။ နောကျဆုံး ဘာဖွဈလို့ ခငျြးလူငယျတှေ အသားကုနျ ဒီနိုငျငံမှာ သူတို့ရတဲ့ အခှငျ့အရေး၊ အခှငျ့အလမျးပျေါမှာ Platform ရှိသမြှကို အသုံးပွုပွီးတော့ လှုပျရှားနသေလဲဆိုရငျ နောကျဆုံး ကနြျောမွငျတာကတော့ ခငျြးမိုလို့၊ ခရဈယာနျမိုလို့၊ မွနျမာနိုငျငံကလာတဲ့ လူမိုလို့ မဟုတျဘူး။ သူတို့နိုငျငံ ကွီးပွငျးလာတဲ့ နိုငျငံက Freedom ကို ဦးစားပေးသူတှဖွေဈပွီး၊ လူ့အခှငျ့အရေး၊ လူ့အရေး လူသားခငျြးစာနာမှု အပွညျ့အဝရှိတဲ့ နိုငျငံမှာ ကွီးပွငျးလာတဲ့ လူဖွဈတဲ့အတှကျကွောငျ့ သူတို့လာတဲ့နိုငျငံ၊ သူတို့ မှေးဖှားတဲ့နိုငျငံမှာ ဒီလိုမြိုး လူမဆနျတဲ့ ဖွဈရပျတှေ ဖွဈနတောကို လူသားတယောကျအနနေဲ့ လကျမခံလို့။ ကနြျောကိုယျတိုငျ လကျမခံနိုငျလို့ ရှိတဲ့ Platform တှကေို သုံးပွီးတော့ တတျနိုငျသလောကျ ပါဝငျကွတာထငျတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ ကနြျောတို့ ငယျငယျကတညျးက ရောကျလာကွတဲ့ လူတှပေဲဖွဈဖွဈ၊ ဒီမှာ (၁၅-၁၆) နှဈမှာ ရောကျလာကွသူတှပေဲဖွဈဖွဈ ပထမဆုံးကတော့ ကိုယျ့နိုငျငံကို ခဈြတဲ့စိတျ ရှိပွီးတဲ့အတှကျကွောငျ့၊ ပွီးတော့ လူမဆနျတဲ့ လုပျရပျတှကေို လကျမခံတဲ့အတှကျကွောငျ့ ဒီလိုမြိုး ထဲထဲဝငျဝငျ ပါဝငျကွတယျလို့ ကနြျော ထငျပါတယျ။
မေး ။ ။ Justin အနနေဲ့ လူငယျတှကေို ပိုပွီးတော့ မွနျမာနိုငျငံအရေး ပိုပွီးတော့ နားလညျအောငျ၊ သဘောပေါကျအောငျ ဘယျလိုမြိုးတှေ ကွိုးစားပွီးတော့ လုပျပေးနတေယျဆိုတာကိုလညျး သိပါရစရှေငျ့။
ဖွေ ။ ။ ကနြျောကလညျး ဘုရားကြောငျးက လူငယျခေါငျးဆောငျတယောကျပေါ့။ ဒီလိုမြိုး ပွဿနာ စဖွဈတဲ့အခြိနျမှာ ကနြျောတို့ ဘုရားကြောငျးမှာရှိတဲ့ လူငယျတှကေို ဆကျသှယျတယျ။ ကနြျောတို့နိုငျငံအတှကျ ဆုတောငျးရအောငျ၊ ဘာလုပျပေးနိုငျမလဲဆိုတာတှေ စဉျးစားရအောငျဆိုပွီး ကနြျောတို့ Zoom Meeting ချေါတယျ။ အစညျးအဝေးချေါတဲ့အခြိနျမှာ တခြို့ဆိုရငျ (၁၃) နှဈ (၁၄) နှဈသားအရှယျပဲ ရှိသေးတယျ - တခြို့လူငယျတှကေ။ အဲဒီအခြိနျမှာ ကနြျောက နညျးနညျးသတိထားတာက အသကျ (၁၃-၁၄) လူငယျကလေးလေးတှကေ ဒီဗမာပွညျအကွောငျးကို How can I explain to them? နားလညျအောငျ ဘယျလိုပွောပွရမလဲ။ အဲဒီလို ကနြျော နညျးနညျးတှနျ့ဆုတျမိတယျ။ ကနြျောက သူတို့ကို စပွောခိုငျးတယျ။ Whatever you feel inside tell me အခု မွနျမာပွညျမှာ ဖွဈပျေါနတေဲ့ ကိစ်စနဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ ကနြျောကို ပွောပါဆိုပွီး စပွောလိုကျတယျ။ (၁၃-၁၄-၁၅) နှဈ ကလေးတှေ - ဒီနိုငျငံကို (၁) နှဈကတညျးက ရောကျခဲ့တဲ့ ကလေးတှကေ စငိုတယျ။ ဒီလိုမြိုး ဒီကိစ်စကို ကွားတဲ့အခြိနျမှာ။ ဆိုတော့ ဘနျးစကားနဲ့ ပွောမယျဆိုရငျ ကနြျော Heart ထိသှားတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ကနြျောက သူတို့တှေ ဒီကိစ်စတှေ မသိဘူး။ ဒီမှာပဲ ကွီးပွငျးလာကွတာဆိုတော့ ဒီအကွောငျးကို ဟိုးအစကနေ ၁၉၆၀ လောကျကနေ ပွနျရှငျးရမယျလို့ လိုမယျထငျတာ။ ဒါပမေဲ့ ဒီ (၁၃-၁၄) နှဈ ကလေးတှကေ Instragram, Facebook စသုံးလာပွီးဆိုတော့ ဒီဗမာပွညျကိစ်စ ဟိုးစဈကောငျစီ - လှတျလပျရေးရပွီးကနေ အခုဖွဈပကျြနတောတှကေို သူတို့တှေ ဖုနျးထဲမှာ စမွငျ စကွညျ့လို့ရပွီ။ သတငျးစာလို စာဖတျနပွေီ။ အဲဒီအခါကွတော့ ဒီကိစ်စကို ခံစားပွီးတော့ စငိုကွတယျ။ ဆုမတောငျးခငျမှာ။ ပွောခငျြတာက လူငယျတှကေို အထူးသဖွငျ့ ဒီနိုငျငံမှာ ကွီးပွငျးလာတဲ့ လူငယျတှကေို အထူးတလညျ ဒီကိစ်စတှကေို ရှငျးပွစရာတောငျ မလိုတော့ဘူး။
သူတို့တှေ ဒီလိုမြိုး အဖွဈအပကျြဆိုးကွီးကို သူတို့ဘာသာ သိလာတယျ။ VOA ရယျ ပရိသတျတှကေိုလညျး ပွောပွခငျြတယျ။ နိုငျငံခွားရောကျ လူငယျတှလေညျး ခတျေမနောကျကတြော့ဘူး။ ဗမာ့အကွောငျး၊ မွနျမာ့အကွောငျးကို အမြားကွီးသိရှိနားလညျလာပွီဆိုတာကို ပွောခငျြတယျ။ လူငယျပိုငျးကိုတော့ အဓိကအားဖွငျ့တော့ တတျနိုငျသလောကျ ခှနျးအားပေးကွတယျ။ Each other encouragement လုပျကွတယျ။ သူတို့နဲ့ သကျဆိုငျရာ သကျဆိုငျကြောငျးမှာ ဒီကိစ်စကို ပုံမှနျ Normal ပွနျမဖွဈသှားအောငျ လူတှရေဲ့ စိတျဝငျစားမှု ပိုကွီးမားလာအောငျ နညျးလမျးမြိုးစုံ သုံးပွီးတော့ ခှနျးအားပေးနကွေတယျ။ ကနြျောဆိုရငျ အစိုးရတှနေဲ့ အဆကျအသှယျရှိတယျဆိုတော့ မွို့နယျအုပျခြုပျရေးတှေ၊ ကှနျဂရကျရုံးတှေ၊ ဆီနိတျရုံးတှကေိုလညျး အဆကျမပွတျ တပတျတခါလောကျ ကနြျောတို့ သူတို့ကို ဗမာပွညျမှာ ဖွဈပကျြနတေဲ့ အကွောငျးအရာတှကေို အသိပေးတယျ။ ဆကျသှယျလုပျပေးတယျ။
မေး ။ ။ နောကျဆုံးတခု မေးခငျြတာက Justin တို့အနနေဲ့ အမရေိကနျပွညျထောငျစုထဲမှာရှိတဲ့ ခငျြးတိုငျးရငျးသားတှအေပွငျ တခွားတိုငျးရငျးသားလူမြိုးတှေ ကရငျ၊ ကခငျြ၊ တခွားတိုငျးရငျးသားတှနေဲ့ ဆကျစပျပွီး၊ စုပေါငျးပွီးတော့ ဒီအာဏာသိမျးမှုကိစ်စနဲ့ ပတျသကျလို့ လှုပျရှားနတောမြိုး ရှိပါသလားရှငျ့။
ဖွေ ။ ။ ဟုတျကဲ့ ရှိပါတယျ။ ကနြျော တခု ဥပမာပွောမယျဆိုရငျ ဝါရှငျတနျဒီစီ - အမတို့နတေဲ့ ဝါရှငျတနျဒီစီမှာဆိုရငျ အပတျတိုငျးလိုလို Every Weekend မှာ ဆန်ဒပွမှု၊ ဆန်ဒထုတျဖျောမှုတှေ လုပျနကွေတယျ။ အဲဒီဟာတှကေတော့ Multiethnic groups မွနျမာပွညျကလာကွတဲ့ တိုငျးရငျးသားပေါငျးစုံ လှုပျရှားနကွေတာကို တှရေ့တယျ။ အဲဒီအထဲမှာလဲ ပါဝငျကွတဲ့ ခငျြးလူငယျတှေ အမြားစု။ ခငျြးလူငယျအဖှဲ့အစညျး အမြားစုလညျး အဲဒီအထဲမှာ ပါဝငျကွတယျဆိုတော့ ကိုယျနတေဲ့နရော၊ ကိုယျတှရေဲ့ မွို့ပျေါမူတညျပွီးတော့ လှုပျရှားတာတှေ ရှိတယျ။ နောကျ Indianapolis မှာ အခုနပွောသလို (၉၀) ရာခိုငျနှုနျးသော ခေါငျးဆောငျတှကေ ခငျြးတှဖွေဈတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ခငျြးလူမြိုး နှဈသောငျးငါးထောငျလောကျ ဒီမှာရှိတယျဆိုတော့ ခငျြးလူငယျတှကွေီးပဲ မဟုတျဘူး။ ဗမာတှေ ရှိတယျ။ ကရငျ၊ ရခိုငျတှေ ရှိတယျ။ မှနျ၊ ရှမျးတှလေညျး ရှိတယျ။ ဆိုတော့ တိုငျးရငျးသားပေါငျးစုံ လူကွီးတှေ ပေါငျးစပျပွီးတော့ လှုပျရှားတာတှေ ရှိတယျ။ ဆိုတော့ ဒီစဈအာဏာသိမျးမှုကတော့ လူမြိုးတမြိုးအရေး မဟုတျဘူး။ ဘာသာတဘာသာအရေး မဟုတျတော့ဘူး။ ဒီဟာက မွနျမာနိုငျငံဖှား လူတိုငျး တိုငျးရငျးသားပေါငျးစုံရဲ့ အရေးကိစ်စ ဖွဈတယျ။ ပွီးတော့ မွနျမာနိုငျငံက လူတှရေဲ့ အရေးပဲ မဟုတျဘူး၊ ကမ်ဘာ့အရေး ဖွဈတယျဆိုတာကိုလညျး ကနြျောတို့ အသိုငျးအဝိုငျး၊ ကနြျောတို့ Community၊ ကနြျောတို့ နိုငျငံတကာ အသိုငျးအဝိုငျးကိုလညျး သိစခေငျြတယျ။ ဗမာပွညျမှာ ဖွဈပကျြနတေဲ့ကိစ်စက ဗမာပွညျရဲ့ ကိစ်စ မဟုတျဘူး။ This is not Burma issue. This is the world issue ဆိုတာကို လူတှကေို သိခိုငျးဖို့ သိစဖေို့က အရမျးအရေးကွီးတယျ။ အဲဒီအခါကွတော့ ကနြျောတို့ တိုငျးရငျးသားတှရေဲ့ လှုပျရှားမှု။ မွနျမာနိုငျငံမှာ မှေးဖှားတဲ့လူတှေ၊ မွနျမာနိုငျငံမှာ ကွီးပွငျးတဲလူတှရေဲ့ လှုပျရှားမှု အရမျးအရေးကွီးတယျ။ ဒါပမေဲ့ International issue ဖွဈတဲ့အထိ လုပျဆောငျဖို့လညျး ကနြျောတို့ဆီမှာ တာဝနျရှိတယျလို့ ထငျတယျ။ အဲဒီအတှကျကွောငျ့ တိုငျးရငျးသားတှပေဲ မဟုတျဘဲနဲ့ နိုငျငံတကာ ကိုယျနဲ့ဆကျသှယျရာ ကိုယျနဲ့ပတျသကျရာ Connection တှမှော ဒီအကွောငျးကို အမွဲတမျး သူတို့ကို နားလညျအောငျ၊ ကူညီနိုငျအောငျ လုပျဆောငျဖို့၊ အကူအညီတောငျးဖို့လညျး တာဝနျရှိတယျလို့ ကနြျောထငျပါတယျ။
မစုမွတျမှနျ ။ ။ Justin Thang ကြေးဇူးအမြားကွီး တငျပါတယျရှငျ့။ အခုလိုမြိုး အခြိနျပေးပွီး ဖွကွေားပေးတဲ့အတှကျ။
ဖွေ ။ ။ ဟုတျကဲ့ ကြေးဇူးအမြားကွီး တငျပါတယျ။